Home - Visa Inyeaka
Ndewo, olee otu anyị nwere ike isi nyere gị aka?
Melite: Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ US na -emepe ọzọ. Onye enyemaka Visa na-aga n'ihu na-enyocha ọrịa COVID-19 maka mmelite ọ bụla gbasara mbata na ọpụpụ na njem.
Mụta otu esi enweta visa US ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Gịnị mere Tụkwasara anyị obi?
Jikọọ na Network Helper Network
Nweta visa US, na-enweghị nsogbu.
Ngwaọrụ anyị dị ike, nyocha na usoro nduzi dị mfe na-akwado gị site na visa US na njem mbata na ọpụpụ, usoro ọ bụla.
Mụta otu esi akwaga na njem na Visa Inyeaka!
Alụmdi na Nwunye Visa
Visa onye ọlụlụ
Green Kaadị lọtrị Visa
Visa onye ọchụnta ego
Omenala Visa Visas
Njem Nleta Ndị njem
Mkpokọta visa mbụ n'ime ụwa niile.
Inweta nnabata maka visa US abụghị ọrụ dị mfe.
Enwere ọtụtụ usoro dị mgbagwoju anya ị ga -agabiga, ọnya na -adịghị agwụ agwụ nke akụrụngwa ịntanetị, na ịchọpụta ya n'onwe gị nwere ike ịkarị akarị.
Ọ bụ ya mere anyị ji mee Visa Assistper; gị otu nkwụsị-shop-online visa na mbata na ọpụpụ akụ center.
Ma ị na-achọ itinye akwụkwọ maka visa US ma ọ bụ na ị tinyela akwụkwọ ma jigide ebe ọ bụla - ntuziaka, nyocha, na ngwaọrụ anyị na-eduzi gị site na usoro iji nweta akwụkwọ ikike gị, ngwa ngwa.
Họrọ obodo gị.
Ihe ikpo okwu anyị na-enye visa nke United States na ozi mbata nke ahaziri maka mba ụfọdụ.
Họrọ mba gị n’okpuru, iji hụ ma anyị nwere ntuziaka, akụrụngwa na ozi maka obodo gị!
Kedu mba ị si Albania Algeria Angola Argentina Armenia Azerbaijan Bahrain Bangladesh Belarus Benin Bhutan Bolivia Bosnia na Herzegovina Botswana Brazil Burkina Faso Brunei Bulgaria Cape Verde Cambodia Cameroon Chad China Colombia Côte d'Ivoire Costa Rica Croatia Cuba Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Eritrea Ethiopia Gabon Gambia Georgia Ghana Guatemala Guinea Honduras Hong Kong India Indonesia Iran Iraq Israel Jamaica Jọdan Kazakhstan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Laos Lebanon Libya Macedonia Malawi Malaysia Mali Mauritius Mexico Moldova Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Palestine Panama Paraguay Peru Philippines Qatar Romania Russia Rwanda Saudi Arabia Senegal Serbia Sierra Leone Singapore Somalia South Africa Sri Lanka Sudan Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tunisia toro toro Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe USA
-Njem Visa n'ịntanetị.
Mụta ka esi etinye akwụkwọ maka visa US n'ihe erughị nkeji iri atọ.
Ị gaghị eji mmiri rie ọtụtụ awa iji zaa ajụjụ ndị metụtara visa gị.
Ngwa Visa Njem anyị dị n'ịntanetị na-eji ajụjụ nhọrọ dị mfe nke na-ebelata ngwa ngwa kpọmkwem ebe ịnọ na visa gị ma ọ bụ njem mbata na ọpụpụ gị.
Dabere na nzaghachi gị, Visa Helper na-ewetara gị ntuziaka akọwapụtara na ozi ahaziri iche ịchọrọ ịchọrọ iji megharịa akwụkwọ visa gị.
-Ntuziaka dị mfe iji ghọta
Kwadebe nzọụkwụ gị ọzọ, na nkeji.
Ntuziaka anyị na-agbagha visa dị mgbagwoju anya na isiokwu mbata na ọpụpụ n'ime usoro dị mfe, dị mfe nghọta.
Ntuziaka ọ bụla nwere ozi ọhụụ nke dị naanị maka ọnọdụ onwe gị na obodo gị.
N’ime nkeji ole na ole, ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị, ghọta usoro ndị ị ga-esote, wee mee ihe ozugbo.
-Visa ruru eru Ule-
Kpaa amụma banyere ohere ị ga-esi nweta visa, tupu ị tinye akwụkwọ.
Nnwale Ule nke Visa anyị bụ ngwá ọrụ na-eme ka anyị nwee ike ịchọta visa US.
Ihe eji eme ihe na ihe omuma gi na nmekorita nke di n'etiti obodo gi na United States.
Dabere na akara puru omume gị, ị nwere ike ikpebi ma ị ga-etinye oge gị, ego na mbọ gị itinye maka visa.
-Arụkọ ọrụ na ndị ọkachamara-
Enweghị ihe egwu, ime-maka-gị ngwa visa.
Ịdebanye aha n'elu ikpo okwu anyị ga -enye gị ohere ịnweta visa ọkachamara na ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ, yana ndị ọrụ nhazi visa tụkwasịrị obi ka emere gị akwụkwọ anamachọihe visa gị.
Ejiri nlezianya nyochaa nzere na aha onye ọ bụla iji hụ na ị jikọtara onye kachasị mma iji nyere gị aka n'okwu ikpe gị.
Nweta ohere zuru oke na ikpo okwu anyị site na ịdenye aha na obere ịkwụ ụgwọ.
2. Ajụjụ Visa
Zaa ajụjụ dị iche iche dị mfe iji nyere anyị aka ịbelata ebe ị nọ na visa gị ma ọ bụ njem njem gị.
3. Mee ihe
Nweta akwụkwọ ntuziaka maka ahazi nke onwe, kọwaa ohere ị nwere iji nweta visa site na nnwale ntozu Visa anyị ma rụkọọ ọrụ na mmekọ ndị otu 3 kwupụtara.
$ 25 mkpokọta.
Mepee zuru ezu ndụ nweta Visa Onye Inyeaka na obere ego, naanị $ 25 USD.
Ndị otu gụnyere:
Ịnweta na Platform Helper Platform
Ịnweta ndị ọka iwu mbata na ọpụpụ na ndị nhazi visa
Ngwa nnwale ruru eru Visa
Akwụkwọ ntuziaka Visa ọhụrụ
Ihe Ntanetị & Blọọgụ
Nkwado Ndị Ahịa Raara Onwe
Chebe onwe gị megide mmejọ ngwa dị oke ọnụ
Mmehie na akwụkwọ visa gị nwere ike gbuo oge nkwado maka ọnwa - ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ.
Mgbe ị debanyere aha maka Visa Assistper, ọ bụghị naanị na ị ga - echekwa oge ịghara ịchọpụta ihe niile n'onwe gị, ị ga - enwekwa aka na - echebe gị ka ị ghara imehie ihe dị oke ọnụ.
Enwere m ike ịmata kpọmkwem ihe m ga-eme iji mee ka di m si na Saudi Arabia nweta Visa Spousal. Iji ikpo okwu a di oke nfe! O were m ihe na-erughị nkeji 10 ma amaara m otu esi etinye ya. M na-ekele Visa Inyeaka ezuru!
Lọ ọrụ US na Russia adịghị ike obibi, anyị amaghị ihe anyị ga-eme iji mee ka Fiance Visa anyị gabiga. Ugbu a anyị maara ihe niile enwere ịma maka usoro anyị ga - esote n'ihi Visa Inyeaka! Ha na-eme ihe niile dị mfe nghọta. Nwunye m nwetara visa ya n'aka ma nọnyeere m na USA.
Visa Helper gbanwere mụ na nwunye m kpamkpam. Enwere m ike ịghọta ụdị visa m chọrọ, usoro, na usoro ọ bụla anyị chọrọ iji hụ na anyị nwetara Visa Di na Nwunye. Ana m akwado onye ọ bụla na-agba mgba na ikpe mbata na ọpụpụ iji Visa Helper.
Enwetara m na Mahadum m dị na Virginia! Enweghị m oge ma ọ bụ ihe ọmụma iji tinye onwe m n'ọrụ mana Visa Helper mere ka ọ dị mfe. N'ihe na-erughị ụbọchị 1 enwere m ike itinye akwụkwọ maka Visa Mmụta.
Mehmet Demir kwuru
Visa Helper bụ ihe mere nwanne m nwoke ji nwee ike ịbịa United States mgbe ọtụtụ afọ chere. Enweghị m ihe ọ bụla ma amaghị m otu esi agagharị na sistemụ ahụ, site na iji Visa Helper enwere m ike ịkpọtụrụ onye ọka iwu iji nyere anyị aka n'okwu anyị. Lovehụnanya dị ukwuu nye Visa Inyeaka!
Nwunye m nke afọ 7 mechara rute USA mgbe ọ nọrọ ọnwa ole na ole na-eme nyocha banyere otu esi etinye akwụkwọ maka Visa Alụmdi na Nwunye. Ekele dịrị Chineke na achọtara m Visa Enyemaka. Ntuziaka visa ha dị mfe nghọta ma soro. Ejim ndi mmadu ihe nile, daalụ.
Banye na-enweta (-enwe kwa izu) mmelite akwụkwọ akụkọ enyere ozugbo na igbe mbata gị.
Nzuzo gị bụ ihe kacha mkpa anyị. Ozi nzipu ozi niile ka edobere kpamkpam. Nwere ike wepu aha na oge ọ bụla. Iji mụtakwuo banyere otu anyị si anakọta, dobe ma hazie ozi nkeonwe gị na nnabata GDPR, biko lee nke anyị amụma nzuzo.
ỌR S ỌR MAT, AKW ANDKWỌ NA AKW ANKWỌ AH BYR US ANYOV B USR US ANY NOT B NOT AD ADGH L Ndụmọdụ Iwu na maka naanị ihe ọmụma. KWES SHR CON KWES YOURR YOUR YOURLỌ NT YOURKWU ND TO NA-ECHICHE Nweta ndụmọdụ na nkwanye ùgwù maka nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla. Iji ya na nnabata na weebụsaịtị anaghị emepụta ndị ọkachamara, ma ọ bụ mmekọrịta dị ka mmekọrịta.
123 Eze Rd. West Street, Obodo 1234
Copyright © 2020 Visa Helper - Ikike niile echekwabara
Ọrụ, akụrụngwa, na nyocha ndị US nyere abụghị ndụmọdụ gbasara iwu yana maka ebumnuche nkọwa naanị na ekwesịghị ịdabere na ndụmọdụ ndụmọdụ iwu ma ọ bụ naanị isi iyi nke ozi. Kwesịrị ịkpọtụrụ onye ọka iwu gị iji nweta ndụmọdụ gbasara nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nsogbu ọ bụla. Iji na ịnweta weebụsaịtị ewepụtaghị mmekọrịta ọ bụla na ndị ọka iwu na ndị ahịa. Echiche na nyocha ndị akọwapụtara na weebụsaịtị enweghị ntụpọ na naanị maka ebumnuche ozi. Agbanyeghi na emeputara ma mezie nyocha data enyere na webụsaịtị ahụ site na isi mmalite ekwere na a pụrụ ịtụkwasị obi, anyị anaghị eme nke ọ bụla ma ị gaghị adabere na akwụkwọ ikike ọ bụla, gosipụtara ma ọ bụ gosipụta, emere maka izi ezi, oke, izu ezu, iwu, ntụkwasị obi, ma ọ bụ uru nke ozi ọ bụla dị n'ime ya. N'okpuru ọnọdụ ọ bụla, anyị ga-enwerịrị ụgwọ ọ bụla n'ụdị gị ọ bụla n'ihi ojiji saịtị ma ọ bụ ịdabere na ozi ọ bụla enyere na saịtị ahụ. Ojiji nke saịtị a na ntukwasi obi gi na ozi obula na saiti a bu ihe ghogburu onwe gi.
Daalụ maka isonye Visa Inyeaka! Ezubere weebụsaịtị a iji wepu ọgba aghara gbasara visa na njem site na igosi gị ozi ịchọrọ. Zaa ajụjụ ndị dị mkpa maka ụdị visa ịchọrọ enyemaka ma ọ bụ chọọ itinye. Cheta ịza ajụjụ ndị a site n 'elele onye na-arịọ arịrịọ (Onye na-achọ maka visa ahụ.) Ọ bụrụ na ị nọrọla na United States ma jiri ọrụ anyị na nnọchite onye ị na-achọ, họrọ nhọrọ ndị dị mkpa ka ha na-abịa elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka, họta bọtịnụ nkwado ma zitere anyị ajụjụ gị.
Haven't tinyebeghị akwụkwọ maka visa a, enweghị nchekasị! Nke mbụ, anyị ga-ewere gị nnwale Visa tozuru oke. Ezubere ajụjụ a iji gosi gị ohere ịnweta visa a site na ịza ajụjụ ole na ole gbasara onye na-achọ (Onye na-achọ maka visa). A na-ahazi ya site na iji data oge nke mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba, na nchekwa dị n'etiti obodo onye na-arịọ arịrịọ na mba lekwasịrị anya. Ule a abụghị nke zuru oke; Ebumnuche ya bụ inye gị otu amụma si nweta visa. Biko rịba ama, Nnwale nke ntozu Visa bụ maka AKW INKWỌ NDF ỌZỌ, ọ dịghị ụzọ ị ga-eji nweta nsonaazụ dị ka ihe ikpebi ikpeazụ maka itinye dịka a na-edozi okwu ọ bụla na visa ọ bụla na ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo dabere na uru ya.
N'ebe a, ị ga-ahụ ndepụta nke ndị ọka iwu ọpụpụ, ndị nwere ikike ịnabata ikike mbata nke nwere ike inyere gị aka itinye akwụkwọ maka visa ma ọ bụ iji nyere gị aka na ngwa gị ugbu a. Họrọ ihe nzacha nke aka ekpe metụtara akwụkwọ ikpe gị iji belata onye ọka iwu ọkachamara na ụdị visa gị. I nwekwara ike chọọ otu ọka iwu aha na search mmanya. Anyị anaghị emechite anya ma ọ bụ akwụkwọ ikike ọ bụla gbasara ọzụzụ ma ọ bụ nka nke ndị na - eweta ya. Na-emecha bụrụ maka inyocha iru eru na ịhọrọ onye na-eweta gị. Site n’ịnọgide na-eji ọrụ anyị, ị kwenyere na ị gaghị akọrọ onye ọka iwu ihe ọ bụla.
Ebe ọ bụ na onye anamachọihe etinyebeghị akwụkwọ maka visa ahụ, ị ​​ga -elele nnwale nnabata Visa. BIKO KWESỊRỊ IHE Ị NA -AZỤZI N'EZIOKWU. Enweghị aghụghọ ọ bụla site na usoro visa US, naanị ị ga -erite uru na nnwale a. Emebere ule a iji gosi gị ohere ịnweta visa a site na ịza ajụjụ ole na ole gbasara onye anamachọihe (Onye na -achọ visa). Emebere ya site na iji data ezigbo oge nke mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba, na nchekwa n'etiti obodo onye anamachọihe na United States. NCHE a apụtaghị ka ọ bụrụ ihe zuru oke; Nzube ya bụ naanị inye gị ihe ruru ị nweta visa. Enwere ike were ule a naanị otu oge. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale ule maka visa ọzọ, ị nwere ike ịmepụta akaụntụ ọhụrụ. Ị nwere ike ịlaghachi wee lelee nsonaazụ gị n'okpuru nhọrọ “Akaụntụ M” dị n'elu. Biko rịba ama, Nnwale nnwere onwe Visa bụ maka ebumnuche ozi naanị, ọ nweghị ụzọ ị ga-esi jiri nsonaazụ ya bụrụ ihe ikpebi ikpebi itinye akwụkwọ maka na a na-edozi okwu visa ọ bụla n'otu n'otu dabere na uru ya.
N'ebe a, ị ga-ahụ ndepụta maka akwụkwọ ntuziaka visa niile akọwapụtara na obodo gị. Chọọ obodo gị na wedaa, wee họrọ ntuziaka visa ịchọrọ ile. May nwere ike ịlaghachi na ibe a site na pịa “My Visa Journey” n’elu, wee họrọ “Otu esi etinye akwụkwọ”.
N'ebe a, ị ga - ahụ ndepụta ndị mmekọ ndị otu 3rd nwere ike ị nwere ike iji tinye maka visa gị. A na-enyocha ndị mmekọ niile ụkpụrụ nke Visa Helper. Nwere ike pịa onye ọlụlụ na ibe a ka enyere gị aka na webụsaịtị ha. Acknow kwenyere na ịdabere na ndị na-enye ọrụ ma ọ bụ ozi nke Ọrụ ahụ nyere naanị maka ihe egwu gị ma ị were ọrụ zuru oke maka ihe egwu niile metụtara ya.